कोरोनाको महामारीबाट जोगिने कि स्कुल खोल्ने ?
एजेन्सी । नेपालमा लकडाउन खुलेको भोलिपल्ट परीक्षा लिने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलेको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै आलोचना भएको थियो । कोरोनाको महामारीबाट जोगिने कि स्कुल खोल्ने भन्ने विषयमा संसदमा समेत प्रवेश गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले शिक्षामन्त्रीको उक्त भनाइ गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । नेपालमा एसईईसमेत अन्तिम अवस्थामा स्थगित भएको थियो । परीक्षाको अघिल्लोदिन बेलुकामात्रै एसईई रोक्ने निर्णय भएको थियो । नेपालमा मात्रै होइन अहिले विश्वभर स्कुल खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने विषय बहसमा छ । कोभिड–१९ सम्बन्धी स्पष
भारत– चीन सामरिक सन्तुलन राख्न लिपुलेक–मानसरोवर सडक निर्माण, नेपाल– चीनबीच बढ्दो घनिष्ठताका बीच कालापानीमा भारतीय उपस्थिति आवश्यक
काठमाडौं । भारतले चीनको पदचिन्ह (रणनीति) नजिकबाट नियाल्नका लागि सामरिक रुपमा कालापानी क्षेत्रलाई अत्यन्तै अहम् रुपमा लिएको छ । लिपुलेक भएर मानसरोवर जोड्ने बाटो निर्माणलाई भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले ठूलो सामरिक सफलताका रुपमा ब्याख्या गरिरहेका छन् । बाटो निर्माणले कैलाश–मानसरोवरको अध्यात्मिक बाटो सुगम मात्रै नभएर चीनसँग सामरिक सन्तुलन पनि कायम भएको उनीहरुको ठहर छ । ‘नवभारत टाइम्स’ ले नेपाल र चीनबीच बढ्दो घनिष्ठताका बीच कालापानीमा बलियो उपस्थिति भारतका लागि अत्यन्त जरुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । उसले ‘बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन’ ले हिमालयको दुर्गम टाकुरा
ट्रम्पले हिन्दु पूजारी बोलाएर ह्वाइट हाउसमा ‘शान्ति पाठ’ गराए (भिडियो सहित )
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस बाट सर्बै भन्दा बढी प्रभावित भएको अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसमा शान्तिपाठ गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हिन्दू पुजारी बोलाएर ह्वाइट हाउनमा शान्तिपाठ गर्न लगाएका हुन् । अमेरिकाको न्यू जर्सीस्थित स्वामी नारयण मन्दिरका पुजारी हरिस ब्रम्हभट्टले ट्रम्पको आग्रहमा विश्व शान्तिको कामना गर्दै मन्त्र वाचन गरेका हुन् । मे ७ का दिन बिहीबार राष्ट्रिय प्रार्थना दिवसको अवसरमा ट्रम्पले पुजारी ब्रम्हभट्टलाई ह्वाइट हाउसमा बोलाएका थिए । ट्रम्पले उत्त क्रममा अमेरिकाले भगवानमा विश्वास गर्ने पनि बताए । ट्रम्पले भने, &lsqu
दिल्लीमा मदिरा किन्नेको एक किलोमिटर लामो लाइन
भरत सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दै पसल खोल्ने अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै मदिरा पसलमा मानिसको हेर्न लायक लामो लाइन देखिएको छ । भारतीय समाचार संस्था एएनआईका अनुसार सोमबार राजधानी दिल्लीमा स्थित देशबन्धु गुप्ता सडकमा रहेको एक मदिरा पसलमा मदिरा खरिद गर्न आउनेको लाइन एक किलोमिटरभन्दा लामो रहेको जनाएको छ । भारत सरकारले सोमबारदेखि मुलुकमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जोखिमको आधारमा छुट्याइएको ‘रेड’, ‘अरेन्ज’ र ‘ग्रिन’ जोनहरुमा मदिरा पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको थियो । दिल्लामा मात्र नभएर अन्य सहरमा पनि मदिरा किन्ने मानिसको भीड बढेको एएनआइले जनाएको
रुसमा एकै दिन थपिए १० हजार ६३३ जना कोरोना भाइरसको संक्रमित
रुसमा एकै दिन १० हजार ६३३ जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै कुल संक्रमितको संख्या १ लाख ३४ हजार ६८७ पुगेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार २ सय ८० पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा रुसमा थप ५८ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमित मध्ये १६ हजार ६३९ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
पाकिस्तानका सभामुखमा कोरोना भाइरस संक्रमण
विश्वभर महमारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पाकिस्तानको तल्लो सदन राष्ट्रियसभाका सभामुख असद कैसरलाई पनि देखिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणको क्रममा उनिमा संक्रमण देखिएको हो । उनि अहिले घरमै क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् । पकिस्तानका स्थनिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएअनुसार उनका छोरा र छोरीमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । पाकिस्तानमा अहिलेसम्म १७ हजारभन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन् भने तीन सय ९१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
प्रकाशित मितिः बैशाख २०, २०७७
कोरोना भाइरसका कारण ५५ जना पत्रकारको मृत्यु
विश्वका २१० मुलकमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभरका ५५ जना पत्रकारको मृत्यु भएको छ । प्रेस अभियान (पीईसी)का अनुसार महामारीको समयमा समाचार सङ्कलन गर्न जाँदा सुरक्षा सामाग्रीको अभावमा कोरोना संक्रमण देखिएका ५५ जना पत्रकार मृत्यु भएको हो । (पीईसी)ले जनाएअनुसार मार्च १ पछि मृत्यु भएका विश्वका विभिन्न २३ मुलुकका ५५ सञ्चारकर्मीमा सङ्क्रमण भेटिएको थियो । पीईसीले सञ्चारकर्मीहरुलाई काममा लगाउँदा सुरक्षा सतर्कताका न्यूनतम पोषाकको प्रबन्ध गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।
रुसका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसुस्टिनलाई कोरोना संक्रमण
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका विभिन्न उच्च पदस्त व्यक्ति हरुमा पनि देखिदै गएको छ । पछिल्लो समय रुसका प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसुस्टिनलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । भाइरसको संक्रमण देखिए पछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ । उनले भिडियो कलमार्फत राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आफूलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको जानकारी गराएको रुसी सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । पुटिनले मिसुस्टिनलाई भएको संक्रमण जो कोहीलाई पनि हुन सक्ने बताए । साथै उनको स्वास्थ्यलाभको कामना समेत गरेका छन् । प्रधमानमन्त्री मिसुस्टिनले भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेको कामको राष्ट्रपति पुटिनले
टिकटकका प्रयोगकर्ता २ अर्ब बढी, यस्तो छ नयाँ कीर्तिमान
वर्तमान समयको सर्वाधिक लोकप्रिय भिडियो शेयरिङ एप टिकटकका प्रयोगकर्ताको संख्या २ अर्ब नाघेको छ । चिनियाँ कम्पनी बाइट डान्स मातहतको यो लोकप्रिय एप गुगलको प्लेस्टोर तथा एप्पलको एप स्टोरबाट गरी २ अर्ब पटक डाउनलोड भएको मोबाइल प्रविधि तथा एप्लिकेसन सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने कम्पनी Sensor Tower ले जनाएको छ । स्मरणहोस्: पाँच महिनाअघि मात्र टिकटकका प्रयोगकर्ता डेढ अर्ब पुगेका थिए । पछिल्लो पाँच महिनामै टिकटकले ५० करोड नयाँ प्रयोगकर्ता थप्न सफल भएको हो । सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा टिकटकले एप डाउनलोडको इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । जनवरीदेखि मार्च सम्मको अवधिमा एप स्टोर र गुगल प्लेमा
प्रकाशित मितिः बैशाख १८, २०७७
कोरोनालाई जितेर फर्किएका बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई पुत्रलाभ
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलाई पुत्रलाभ भएको छ । जोनसनको श्रीमती क्यारी साइमण्डस्ले बुधबार छोरा जन्माएकी हुन । बुधबार बिहान लन्डन अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीलाई पुत्रलाभ भएको कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री जोनसनका प्रवक्ताले जानकारी दिएका थिए । साथै उनले आमा र शिशुको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको पनि बताए । प्रधानमन्त्री जोनसन र उनकी श्रीमतीले लन्डनको नेसनल हेल्थ सर्भिस् अस्पतालका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्री जोनसन कोरोना भाइरस संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचार गराएर फर्किएका थिए । गत सोमबारबाट मात्र उनि काममा फर्किएका थिए ।